Umbono: akuyona yonke imikhiqizo "yemvelo" eyenziwe ngokulingana - Potato System Magazine
Ingabe ufuna igama elithi "yemvelo" in the ukudla uthenga? Namuhla, abaningi bayakwenza. Umthengi funa liyancedisana abathengisi ukubeka ngaphezulu imikhiqizo "kungokwemvelo" emashalofini ezitolo zabo.
Imikhiqizo ebikade itholakala kuphela ezitolo zezempilo noma ezitolo ezikhethekile (njenge-Sprouts Farmers Market, i-Whole Foods noma i-Natural Grocers) manje isiyatholakala ezitolo ezinkulu zendabuko.
ilebula Yemvelo ikhuthaza yokuthengisa
I-International Food Information Council (IFIC) yenza ucwaningo lwaminyaka yonke lwabathengi ngezihloko ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukuthi imininingwane ehlukene ilebula iyithinta kanjani indlela abazithenga ngayo. Ngokwe-2019 Food & Health Survey, ngaphezu kwe-1/3 yabathengi bakhethe umkhiqizo othile ngoba umkhiqizo ubhalwe ukuthi "wemvelo". Lo mqondo kuvele ukuthi ubaluleke kakhulu "kunomkhiqizo ophilayo" noma "umkhiqizo ongewona we-GMO".
Amagama anomthelela onamandla ngokuziphatha. Akubona abathengi kuphela abangathuthukisa ukuthenga umkhiqizo onelebula “yemvelo,” futhi bathi lo mkhiqizo unezici eziningi ezingeziwe. I-IFIC ibuze abathengi ukuthi yini, ngokubona kwabo, okungenzeka ukuthi ilethe izinzuzo ezinkulu empilweni yabo: umkhiqizo onelebula "konke okwemvelo" noma umkhiqizo ofanayo ngaphandle kwelebula? Ngokumangazayo, ama-70% wabathengi abahloliwe bakhetha impendulo yokuqala.
Kulula ukuqonda ukuthi kungani abathengi becabanga ukuthi yonke imikhiqizo yemvelo inempilo. Zonke izinsuku sibona izindaba eziphathelene nokubulala izinambuzane ekudleni kwethu nasekuphuzeni kwamanzi angcolile. Sizungezwe amakhemikhali nemikhiqizo ecutshungulwe kakhulu (equkethe izithako eziningi zokwenziwa). Sikhathazeka ngempilo nokuphepha kwezingane zethu futhi sifuna ukushintsha okuthile kulesi simo. Ukuqeda izithako zokufakelwa kanye nokugcinwa kokulondolozwa okwenziwe kanye nodayi kubonakala kubantu abathile indlela enhle yokuqalisa.
Source: Izindaba Zamazambane Namuhla
Tags: imikhiqizo organicInhlolovo Yabantuukukhula kwezentengiso
Ubhatata njengendlela yokulwa ne-coronavirus